न्यूरो हस्पिटलमा डाक्टर रोकाको प्रशंसा – Janacharcha.com
» ब्यानर » स्वास्थ्य अंक: 4272
न्यूरो हस्पिटलमा डाक्टर रोकाको प्रशंसा
न्यूरो हस्पिटल विराटनगरले न्यूरोसर्जन डा. यमबहादुर रोकालाई कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै न्यूरो हस्पिटलमा कार्यरत्त डाक्टर रोकालाई संस्थामा अथक योगदान पुर‍्याएको भन्दै हस्पिटलले कृतज्ञता व्यक्त गरेको हो ।
मंगलबार न्यूरो अस्पतालले पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरी डा. रोकाले संस्थामा पुर्याएको योगदानबारे मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेको थियो ।
डाक्टार रोका भर्खरै मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानपदवी, अलङ्कार र पदकले सुशोभित भएका चिकित्सक समेत हुन् । सोही उपलक्ष्यमा न्यूरो अस्पतालले डा. रोकालाई बधाई ज्ञापन गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै न्यूरो हस्टिलकी कार्यकारी निर्देशक एलिशा विष्टले संस्थामा अथक योगदान पुर्याएको भन्दै डा.रोकालाई धन्यावाद ज्ञापन गरेकी थिईन् । त्यस्तै हस्पिटलका डाईरेक्टर रंजित बस्नेतले डा. रोकाको अथक महनेत र प्रयासलेनै हस्पिटलले आज उच्च मुकाम हासिल गर्न सफल भएको जिकिर गरेका थिए । जवाफमा डा. रोकाले न्यूरो हस्पिटलले आफुलाई दिएको अवसरप्रति सधै आभारी रहने भावव्यक्त गरेका थिए ।
नेपालमा न्यूरोसर्जरी सुरु भएपछि पूर्वाञ्चलमा पहिलो न्यूरोसर्जरी सेवा दिने रोका नै पहिलो डाक्टर हुन् । । उनी विगत २१ वर्षदेखि पूर्वाञ्चललाई कर्मथलो बनाएका छन् । उनले ११ वर्षभन्दा बढि समयदेखि विराटनगरमै सेवा दिईरहेका छन् ।
न्यूरोसर्जन डाक्टर रोका जनसेवाश्री पदकबाट शुक्रबार विभुषित भएका थिए ।